मान्छे - भिडियो च्याट - जीवन डेटिङ - लाइव धाराहरु!
एक बालिका गाइड इटाली
शानदार र मन-उड्ने ।
यो एक अतिथि पोस्ट लौरा द्वारा, हाम्रो निवासी विशेषज्ञ मा महिला यात्रा । इटाली छ एक लोकप्रिय बाल्टिन-सूची वस्तु अधिकांश मानिसहरू लागि, तर यसको एक विशाल र विविध देश छ । गैर-स्टप दाखबारी गर्न अनन्त कार्बोहाइड्रेट (र को टन मा बीच), यहाँ एक केटी नेभिगेट इटालीकारण यात्रा गर्न इटाली छन् रूपमा अंतर रहन्थ्यो रूपमा यसको स्वाद छ । केही मानिसहरू जान को एक स्वाद प्राप्त गर्न इतिहास, अरूलाई मा भाग लिन बाहिरी गतिविधिहरु. मेरो लागि, इटाली सबै बारे छ र. देखि वास्तुकला गर्न खाना रक्सी, जीवन इटालियनहरू सबै बाहिर जान छ । तिनीहरूले कसरी थाह खान, तिनीहरूले ड्रेस कसरी थाहा, र तिनीहरूले यो गर्न कसरी थाहा पार्टी । महिला बनाउन गर्नुपर्छ एक तिर्थयात्रा इटाली मा एक बिन्दु वा अर्को देख्न र लिनुहुन्छ मा इटाली गरेको सुख, जो निम्न समावेश: इटालियन पुरुष गरौं कटौती गर्न सही: इटालियन पुरुष सुन्दर छन्. यो वाक्यांश, अग्लो, कालो र सुन्दर थियो उक्त इटाली. म भन्दा सोझो महिला पाउन इटालियन पुरुष हुन सजिलो आँखा भने त, हेरिरहेका मानिसहरूले आफ्नो कुरा छ, त्यसपछि विचार गर्न शीर्षक इटाली. मानिसहरू यहाँ धेरै नरम र यो सजिलो बनाउन तिनीहरूलाई प्रेम पर्नु छैन, जो टी एक खराब कुरा । मूर्तिहरु भने इटालियन मानिसहरू के छैन, यो तपाईं को लागि, सायद व्यक्तिहरूलाई गर्छन् । तिनीहरूले सामान्यतया एक, खराब छनौटको लाइनहरु, र तिनीहरूले लगाउने धेरै सानो छ, कुनै पनि भने, कपडे । माइकलएन्जेलो गरेको दाऊदले छ एक को इटाली सबैभन्दा लोकप्रिय मूर्तिहरु. फ्लोरेन्स बाहिर जाँच, आफ्नो पोज लागि बन्द देखाउने आफ्नो आंकडा छ । हेर्न दाऊदले छन्, दुई उत्तिकै उल्लेखनीय शहर मा. तपाईं पनि गर्न टाउको ग्यालरी हेर्न को एक धेरै मूर्तिहरु र कला मा एक ठाँउ छ । कार्बोहाइड्रेट: लालसा अधिक मानिसहरूको भन्दा । त्यसैले किन छैन पूरा संग पिज्जा, पास्ता र रोटी छ । म एकदम निश्चित इटाली दिन हुनेछ आफ्नो बीचमा औंला आहार भने यो हुन सक्छ. इटालियनहरू गर्छन रोटी खान संग हरेक भोजन, र हुनत यो भारी खाना, इटालियन पास्ता र पिज्जा छन्. यदि मौसम राम्रो छ, एक आउटडोर खाने द्वारा मोमबत्ती. र यदि तपाईं को आवश्यकता समातेर एक छिटो गास खान, तपाईं सधैं माथि टिप्न एक टुकडा पिज्जा को लागि बस एक जोडी यूरो । जुलिया रॉबर्ट्स मा खाओ, प्रार्थना, प्रेम थियो एक समस्या मा उपयुक्त जीन्स पछि केही महिना मा इटाली को लागि एक कारण हो । इटाली मा छन् जस्तै - बैंकक मा: तिनीहरूले जताततै छौं, त्यसैले आषा तपाईं छोडेर छु कोठा, मिठाई लागि, एक कार पछि-भारी भोजन । यसको एस एक अपराध छैन जस्तै इटालियन आइसक्रिम । यो कठिन गंध गर्न हौसले गरे शंकु र देख्न विस्तृत विविधता को स्वाद र प्रलोभनमा पर्न चरण भित्र । त्यहाँ यति धेरै स्वादिष्ट स्वाद भनेर यो कठिन हुन सक्छ, छनौट गर्न, बस एक. यदि तपाईं स्पेयर कोठा छ, आफ्नो निर्णय सजिलो र प्राप्त जोडी (नरिवल, र चकलेट). र भने हमला, छ को ठाँउ मा, एक खाना छ । म आफैलाई बताउन,"इटाली"माफ गर्न मेरो आइसक्रिम खाने बानी, त्यहाँ छ । यायावर मत्ती भन्छन्: म प्रेम स्याउ स्वाद, र यदि तपाईं पुन भन्दा, केही उपायहरु जस्तै यो कागति.
म प्रेम एक राम्रो गिलास रक्सी संग खाने । इटाली गरेको रक्सी क्षेत्रहरु को पूर्ण पैक दाखबारी छ । त्यहाँ रक्सी क्षेत्रहरु मा इटाली, त तपाईं हुन बाध्य छौं यात्रा को एक निकट.
तपाईं लिन सक्छन् एक संगठित खेत भ्रमण, जो सधैं समावेश एक टेस्टिङ. खरीद रक्सी को किराना पसल मा इटाली मा पनि हास्यास्पद, सस्तो त भएको रात्रिकालीन ग्लास (वा बोतल) को रक्सी सजिलो छ गर्न कुनै बजेट । वास्तुकला पृष्ठभूमि मा डिजाइन मूल्यांकन गर्न हडताली वास्तुकला मा इटाली. देश छ, सबै भन्दा राम्रो लागि जानिन्छ यसको प्राचीन रोमन र आर्किटेक्चर छ । छन् रोचक संरचना जताततै तपाईं बारी । पराउँछु रोम मा, फ्लोरेन्स मा, रंगीन घर मा, वा कुनै पनि इटाली अचम्मको (सार्वजनिक वर्ग). संग इतिहास को वर्ष हजारौं, इटाली प्रदान यति धेरै लुभावनी कुराहरू हेर्न । म प्रेम पोशाक दल, र म धेरै निश्चित छु भेनिस गरेको मेला हुनेछ अन्तिम एक धाउन । अवधि पोशाक र मास्क बनाउन एक रहस्यमय तत्व मा यो पहिले नै आकर्षक शहर हो । मेला सुरु वरिपरि दुई सप्ताह पहिले ऐश बुधवार र समाप्ती मा मार्डी ग्रास (दिन अघि ऐश बुधवार). रूपमा लामो रूपमा तपाईं खडा गर्न सक्छन् हुनुको मा विशाल भीड, माथि लागि मेला एक उजागर छ मा एक इटालियन. किनमेल गर्दा म छु को विषय मा पोशाक-अप, छाला जूता र पर्स मा फ्लोरेन्स साथ, एक उदीयमान फैशन दृश्य, पूरा हुनेछ कुनै पनि आग्रह गरेको छ । त्यहाँ ठूलो सानो अद्वितीय आइटम र पनि प्रशस्त सडक विक्रेताहरु गर्न खयाल छ । गुच्ची, प्रादा, र एक हजार अन्य डिजाइनर बनाउन आफ्नो घर मा इटाली.
बनाउन अतिरिक्त अन्तरिक्ष मा आफ्नो झोला को लागि सबै फैशनेबल लुगा तपाईं संग आफ्नो मित्र प्रभावित घर फिर्ता । इटाली को एक सानो स्वाद स्वर्ग लागि महिला यात्री । जबकि म प्रेम कला र वास्तुकला मा इटाली, त्यहाँ पनि सेक्सी पुरुष, सान्त्वना खाना र पेय, र विस्तृत कि घटनाहरू बाहिर गोल किन कारण हरेक महिला मा लिप्त गर्नुपर्छ एक इटाली गर्न यात्रा.
लौरा वाकर चल्छ वेबसाइट एक भटक एकमात्र छ । त्यो हाल बस्नुहुन्छ पोर्टल्याण्ड मा जहाँ त्यो चल्छ, एउटा सहायक र घर सामान ब्रान्ड उत्पादित पूर्व अफ्रीका मा.
साथै चलिरहेको उनको व्यापार, लौरा रूपमा काम एक काम लागि प्रशिक्षक भर्खरै आइपुगे शरणार्थी उनको शहर हो । त्यो काम ग्राहकहरु संग सबै दुनिया भर देखि र प्रयोग उनको सीमित ज्ञान स्वाहिली सेवा गर्न गर्छ । त्यो पनि सेवा ग्राहकहरु देखि मध्य पूर्व, एशिया मा, मा अन्य देशहरुमा, अफ्रिका, मध्य अमेरिका र क्युबा छ । लागि एक पूर्ण पुस्तिका मा एकल महिला यात्रा, बाहिर जाँच नयाँ पुस्तक, विजयी पर्वत । त्यसमाथि छलफल को धेरै व्यावहारिक सुझाव को तयारी र योजना आफ्नो यात्रा, पुस्तक ठेगाना डर, सुरक्षा, र भावनात्मक चिन्ता महिला बारेमा एक्लै यात्रा.
यो विशेषताहरु को भन्दा बीस संग साक्षात्कार अन्य महिला यात्रा लेखक र यात्री । यहाँ क्लिक अझ बढी सिक्न पुस्तक र कसरी यो तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन्, र तपाईं पढ्न सुरु गर्न सक्नु यो आज । मेरो मनपर्ने भाग जीवित फ्लोरेन्स मा थियो, बजार । हरेक मानिस मारा थियो मलाई । सबैलाई । जब म थियो एक खराब दिन भएको छ, म चाहन्छु, एक पैदल लागि जाने माध्यम बजार र बिदा मा धेरै राम्रो आत्मा छ । पुरुष, र किनमेल । म चाहन्छु कि जस्तो लाग्छ एकल महिला यात्री छन् यी द्वारा अब छ । म निश्चित छु म छु भन्दा पुरुष, र किनमेल, र म यो एक अपराध हुनेछ जान इटाली र बेवास्ता सबै तीन प्लस, रक्सी, वास्तुकला, र मेला मदत सन्तुलन बाहिर ती.
यो तपाईं जस्तै आवाज थाह खराब पक्ष एक बिट पनि राम्रो तरिकाले म सोच्न छ, उपचार को लागि उपाय सबै. क्रिस्टोफर, म दु: खी छु तपाईं सुन्न थिएन, एक राम्रो अनुभव मा इटाली. जीवित इटाली कहिलेकाहीं गाह्रो हुन सक्छ र कठिन छन्, तर यति धेरै सकारात्मक पक्षहरू (समावेश छ।) कि अझै पनि यो एक विशेष ठाउँ हुन । म थियो एक (वा दुई वा तीन) पनि धेरै स्लाइस को पिज्जा म त्यहाँ थियो, जबकि, तर यसको मेहनत गर्न मा पारित गरेर पिज्जारीएस र माथि टिप्न एक टुकडा छ । मिशेल, तपाईं पक्का गर्न जाने नेपल्स लागि पिज्जा । तपाईं गर्न सक्छन् कहिलेकाहीं पाउन सभ्य पिज्जा अन्यत्र इटाली, तर बेला नापोलि छ जहाँ यो आविष्कार भएको थियो. म आशा गर्न यो बनाउन इटाली फेरि लेख्न. म गए मिलान गत वर्ष फैशन हप्ताको समयमा, तर यो साँच्चै थिएन के म आशा. जब मेरो साथी र म थिए इटाली, केही वर्ष पहिले हामी खाए हरेक एकल दिन र, केही अवसरमा, धेरै पटक एक दिन छ । पनि, सबै भन्दा राम्रो पिज्जा म कहिल्यै स्वाद थियो नेपल्स.
ओह, कसरी म फिर्ता जान चाहनुहुन्छ, इटाली ह्या.
यति खुशी छ कि तपाईं गए नेपल्स. यो अक्सर बेवास्ता छ जब मानिसहरू यात्रा इटाली. बिल्कुल मेरो मनपर्ने शहर. यो एक राम्रो पोस्ट, र म सहमत खाना र वास्तुकला भाग. म खर्च गर्न सक्छन् दिन बस वरिपरि हिँडिरहेका को सडकमा मा इटालियन शहरहरू र खाने आफ्नो खाना छ । र आइसक्रिम को को पाठ्यक्रम लिन टोष्ट हा-हा, म सहमत जबकि, इटालियन मानिसहरू मेरो कुरा छैन, वास्तुकला, खाना र रक्सी माथि गरे को लागि यो गुना. म यो स्वीकार: म परे लागि एक इटालियन मानिस । खुसीको कुरा, उहाँले पतन लागि, मलाई पनि । म प्रेम भएको एक मायालु, सुन्दर र एक तयार माफ गर्न जाने भ्रमण परिवार मा रोम र नेपल्स.
हो, म सहमत इटाली यस्तो मजा लागि ठाउँ महिला । म प्रेम माध्यम भटक बजार र खरीद.
म पनि बस द्वारा दूर कला र वास्तुकला जताततै म गए । म थियो, सबैभन्दा अभूतपूर्व च्याउ पेरुगिया र यस्तो स्वादिष्ट मा रोम र फ्लोरेन्स. ओह, इटाली. म प्रतीक्षा गर्न सक्दैन फिर्ता जान । म सहमत, टी तपाईं केहि गर्न सक्दैन, प्रेम मा इटाली. वास्तवमा, बोल्ने बारेमा तातो पुरुष, लिए एक स्नान र मा बसिरहेका रक अर्को हामीलाई संग एक स्नान इटालियन सौन्दर्य, पूर्ण संग तातो गुलाबी बिकनी सुट र छाती. मा अमेरिका मा, घोर तर एक रक मा इटाली मा तेजस्वी । म लिए, एक जोडी फोटो । म थियो । म एम एक मान्छे छ, तर म छु मा यो लेख । म गरिएको रोम लागि केही दिन, तर आधा समय त्यहाँ बिताए थियो मा ब्रिटिश दूतावास (धन्यवाद मेरो पूर्व र एक बम पड्कनु) टी प्राप्त लगभग धेरै र पिज्जा समय रूपमा म चाहन्छु मन पर्यो छन्.
ओह राम्रो, म अनुमान म जान फेरि म लागि अब एक वर्ष त थाहा छ यो एकदम राम्रो र गर्न सहमत खाना र बरफ क्रीम सबै भन्दा राम्रो हो कहिल्यै.
तर सबै पुरुष छन् अग्लो, गाढा र सुन्दर, विशेष गरी भने, तपाईं सेमी अग्लो, मलाई जस्तै, अझै पनि उनलाई धेरै छोटो छन्. लाज । मलाई लाग्छ कि, धेरै टिप्पणी यहाँ समावेश खराब सूची को साधारण-ठाउँमा म कहिल्यै सुनेका इटाली. इटाली धेरै समस्या र धेरै कुराहरू काम, तर तपाईं भने साँच्चै थाहा छ कि देश तपाईंलाई थाहा छ कि यो एक धेरै साधारण पक्ष धेरै ठाउँमा. यो अक्सर रूपमा वर्णन पिज्जा, पास्ता र, तर तपाईं साँचो हो यात्री (र पछि तपाईं पढ्न यो ब्लग तपाईं हुनुपर्छ) तपाईंलाई थाहा छ कि इटाली बस रोम, भेनिस, फ्लोरेन्स र मिलान । त्यहाँ छ एक ठूलो विविधता को विभिन्न परिदृश्य, सबै भन्दा ठूलो सांस्कृतिक सम्पदाको को विश्व र के गर्न धेरै कुराहरू छन् । यहाँ तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् जैतून बगैंचाहरु र उकालो पहाडहरु, निद्रा लागेको गाँउ संग आकर्षक, प्रशस्त दाखबारी, मध्ययुगीन महल, पुरानो चर्च र सबै कला र इतिहास निर्माण. त्यसैले, तुच्छ टिप्पणी बारेमा के. म तपाईं सुझाव केही लिंक गर्न तपाईंलाई मदत गर्नेछ भन्ने थाहा इटाली एक सानो अधिक र (शायद) यो मूल्यांकन.इटाली.यो अन्त घर । इटाली र प्रवास को एक मा यी साना शहरहरू. म भएको कहिल्यै बाहिर हामीलाई तर मेरो हृदय सधैं एक सानो प्रारम्भिक. कुनै पनि सल्लाह को लागि उपयोगी हुनेछ मेरो पहिलो यात्रा । म शायद छैन घर आउन चाहेको, म यो प्रेम. इटाली साँच्चै लुभावनी, ठाँउहरु, म संग प्रेम मा यो देश र म गर्न सक्दैन प्रतीक्षा गर्न फिर्ता जान । म मा थियो इटाली मा हुन सक्छ, म प्रेम बारेमा सबै इटाली. म विशेष गरी मन पर्यो फ्लोरेन्स. म फिर्ता जान चाहनुहुन्छ, अर्को वर्ष मा हुन सक्छ. म भने हेर्न यो समय, म यो गर्न सक्छन् मा एक बजेट छ । ओह, आइसक्रिम भयानक छ. अर्को समय विचार भेट्न पनि केही साना शहर, जस्तै ट्रेभिसो, उदाहरणका लागि, भनिन्छ बगैचा को भेनिस, बिल्कुल, मातृभूमि को रक्सी र राम्रो लागि किनमेल । अरे सबैलाई । कारण को उमेर गर्न, यो पोस्ट र कठिनाई मा मध्यस्थता धेरै पोस्ट स्पाम टिप्पणी यहाँ बन्द गरिएको छ ।.
जब मा सुपरमार्केट छन् अनौठो मुठभेडों (भिडियो) - साइटहरु
सुपरमार्केट पनि हुनेछन् एउटा चिन्ह को साधारण, तर विभागको बीच अक्सर सामना प्रकार साँच्चै असाधारण: मान्छे संग वरिपरि पुच्छर निकालेको देखि, आफ्नो प्यान्ट वा प्रवेश घोडा, के किनमेल मा आफ्नो अंडरवियर संग विग ट्रम्प गर्न, वा शैली मा टीना टर्नरर तपाईं छैन बचत पनि सुरक्षा मान्छे. छ कि मान्छे संग वरिपरि पुच्छर निकालेको देखि, आफ्नो प्यान्ट वा प्रवेश घोडा, के किनमेल मा आफ्नो अंडरवियर संग विग ट्रम्प गर्न, वा शैली मा टीना टर्नर. जारी साइट ब्राउज निम्न, नयाँ नियम मा गोपनीयता, हामी सोध्न तपाईं को प्रयोग अनुमति कुकीहरू र यस्तै प्रविधि, व्यक्तिगतकरण गर्न आफ्नो प्रयोगकर्ता अनुभव छ । यात्रा हाम्रो गोपनीयता नीति अझ बढी सिक्न.
डेटिङ र आगन्तुक
तर त्यो विवाह एक विदेशीले
नमस्कार, उहाँले मा अर्को मुद्दा ठाउँ । प्यारा एक पटक दिइएको पूरा गर्न एक उज्ज्वल महिला स्थान मा.
प्रदान गरिएको छ पूरा गर्न, यो महिला मा यो ठाँउ. धेरै मानिसहरू दिन एक अन्तर्राष्ट्रिय डेटिङ संयन्त्रको । स्वचालित अनुवाद सेवा, प्रतिक्रिया मा संचार, इमेल, नियमित मेल र अन्य विशेषताहरु, एक सरल र रोचक गतिविधि लागि विदेशीहरू आज । हजारौं मानिसहरू छन् जो पोस्ट मा प्रोफाइल, लागि बालिका विवाह गर्ने हृदय देखि, चार्ज को पूर्ण मुक्त.
म एक हुन चाहनुहुन्छ
तपाईं के गर्न सबै छ फारम भर्न.
छैन भने, तपाईं बाहिर हराइरहेको छौं.
गुणवत्ता तस्वीरहरु छोटो समय मा, गारंटी सफलता ।.
भिडियो च्याट मा"अमेरिकी". अज्ञात सत्र मा अंग्रेजी
मा अमेरिका खुल नयाँ अवसर । पहिलो, तपाईं गर्न सक्छन् अंग्रेजी सिक्नसबै दुनिया भर, वार्ता सञ्चालन गर्दै मुख्यतः अंग्रेजी मा. पनि जहाँ देशहरुमा आधिकारिक भाषा फ्रेन्च, स्पेनिस, इटालियन वा जर्मन बिना काम. त्यसैले तपाईं देख्न सक्छौं, बालिका र केटाहरू. पर्याप्त पूरा गर्न । नयाँ कुरा सिक्न आफैलाई लागि । आधा एक घण्टा भ्रमण गर्न सम्पूर्ण संसारमा प्रयोग गरेर अनलाइन एक वेब क्यामेरा र माइक्रोफोन । र यो बस एकदम रोचक खर्च गर्न आफ्नो समय संग मान्छे विदेश देखि. र, को पाठ्यक्रम, को फाइदा को एक भावनाहरु च्याट गर्न सक्छन् भन्ने छ, अज्ञात रहन. तपाईं आवश्यकता छैन एक फोन नम्बर वा ठेगाना । तपाईं पनि गर्न आवश्यक छैन, आफ्नो इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्. कुनै एक हुनेछ आफ्नो साइट फेला सामाजिक नेटवर्क मा, र तपाईं कष्टप्रद. बटन क्लिक गर्नुहोस् र चयन प्राण सम्पर्क । यदि अन्य व्यक्ति थकित छ, बस फेरि क्लिक गर्नुहोस् र स्विच गर्न, अन्य व्यक्ति ।.
मुक्त फोटो च्याट बिना दर्ता
अन्धा सज्जन । मा क्लिक"म आश्चर्य"बटन, तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी लिजा ठाउँमा एक विज्ञापन जसमा उनले निर्दिष्ट गर्दा त्यो चाहन्छ उनको अन्धा त्यहाँ छ, र उमेर को मानिस छ जसले बोल्न चाहन्छडोनाल्ड जाँच पेज र देख्नुहुन्छ कि केटी हो को लागि देख एक मानिस उनको उमेर । क्लिक गर्नुहोस्"म हेरविचार"बटन र तपाईं, हुनेछ छ पहुँच प्राप्त गर्न यो पृष्ठ. एक: ईमेल प्राप्त देखि लिसा र डोनाल्ड लिंक संग एक च्याट जहाँ तपाईं कुरा गर्न सक्छौं.
स्वीडेन: ई. स्विडिश परिवार
स्विडिश परिवार । हाम्रो अनलाइन टिभी च्यानल भन्दा अधिक लोकप्रिय च्यानल तपाईं देखि चयन गर्न सक्छन्
देश शैली छ । प्रसारण च्यानल छ ।.
सभ्य सभाहरूमा शहर मा, ठूलो वा सानोतपाईं दर्ता गर्न सक्छन् मुक्त लागि हाम्रो वेबसाइट मा, थप फोटो र सुरु चैट । हजारौं केटाहरू र बालिका विशेष दर्ता पाउन यहाँ एक प्रेमी, प्रेमिका वा नयाँ प्रेम । योग्य मिति शहर मा, ठूलो वा सानो. तपाईं दर्ता गर्न सक्छन् मुक्त लागि हाम्रो वेबसाइट मा. एक प्रोफाइल सिर्जना थप्न, फोटो, र सुरु चैट । हजारौं केटाहरू र बालिका विशेष दर्ता पाउन यहाँ एक प्रेमी, प्रेमिका वा नयाँ प्रेम ।.
को लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँमा हिँड्नुभएको मा स्वीडेन
बालिका फ्री अनलाइन भिडियो परिचय भिडियो च्याट कोठा बिना दर्ता भिडियो च्याट वयस्क लागि पूरा गर्न एक केटी मोबाइल डेटिङ भिडियो अनलाइन डेटिङ डेटिङ भिडियो च्याट अनलाइन संग बालिका विवाहित महिला चाहने पूरा गर्न तपाईं विवाहित महिला पूरा गर्न चाहन्छ विज्ञापन